Ndị na - enye FFP1 na ndị na - ahụ maka ihe mkpuchi - China FFP1 Ndị na - achọpụta ihe mkpuchi
150mm Wet Polishing Pads A…
Anụ ọhịa ahụ dị 4 inch ...
Plastic PDR okwute mmiri polis…
Nkpuchi Respirator FFP3
CE FFP1 Nonwoven Disposable Face Mask
Nnwale Ọmụmụ Ihe Ngwaọrụ bụ arụmọrụ kachasị mkpa nke uwe nchebe, gụnyere akụkụ atọ: arụmọrụ mgbochi mmiri, arụmọrụ mgbochi microbial, arụ ọrụ filtration. Ihe mgbochi mmiri na-ezo aka na uwe nchebe ahụike ga - enwe ike igbochi ntopute nke mmiri, ọbara, mmanya na ihe ọ otherụ otherụ ndị ọzọ, na - enwekarị ihe karịrị ogo 4 nke hydrophobicity, iji zere nje virus nke ọbara onye ọrịa, mmiri ahụ na ihe nzuzo ndị ọzọ na - ebute ọgwụ staf ...
CE FFP1 Nkpuchi Mara
Uru anyị ： 1. Welcom OEM & ODM. 2. Ọnụahịa ụlọ ọrụ, enweghị ọdịiche ọnụahịa etiti. 3. Enwere ike ịchịkwa ịdị mma nke ọma. 4. Ọtụtụ ngwaahịa, ụdị, ụdị, imewe wdg. 5. Ihe ọ bụla ịchọrọ, anyị nwere ike ịchọ gị oge dị mfe. 6. Mara ahịa na ngwaahịa ọ bụla anyị nyere. 7. Ọkachamara ma nwee ahụmihe. 8. "Nzaghachi ngwa ngwa" & ezigbo ọrụ mgbe ịre. Kedu ihe ihe nnwale ahụ? Uwe mkpuchi ahụike bụ ngwaọrụ nchebe nchekwa nwere oke dị elu ...
Uru anyị ： 1. Welcom OEM & ODM. 2. Ọnụahịa ụlọ ọrụ, enweghị ọdịiche ọnụahịa etiti. 3. Enwere ike ịchịkwa ịdị mma nke ọma. 4. Ọtụtụ ngwaahịa, ụdị, ụdị, imewe wdg. 5. Ihe ọ bụla ịchọrọ, anyị nwere ike ịchọ gị oge dị mfe. 6. Mara ahịa na ngwaahịa ọ bụla anyị nyere. 7. Ọkachamara ma nwee ahụmihe. 8. "Nzaghachi ngwa ngwa" & ezigbo ọrụ mgbe erere. Ngwa ： 1. Ngwa: eji ewu ihe, ihe eji egwuputa ihe, ihe ndi ozo. 2. Ngwa ...
Ngwa ： 1. Ngwa: eji ewu ihe, ihe eji egwuputa ihe, ihe ndi ozo. 2. Ngwa: ndụ kwa ụbọchị, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ, ebe ọrụ, wdg. 3. Nchedo ihe ndị na-egbu Organic na ísì 4. Nchedo nke ụmụ irighiri ihe na -eme ka mkpịsị aka, nhicha, ịsa ahụ na akpa. na nhazi nke ore, kol, iron iron, ntụ ọka, metal, osisi, pollen na ụfọdụ ihe ndị ọzọ. Liquid ma ọ bụ nke mmanu mmanu meputara site na spra…